Ongororo yekutanga yeiyo HomePod mini yatobuda | IPhone nhau
Ongororo yekutanga yeiyo HomePod mini yatobuda
Apple inoronga kuendesa ekutanga mayuniti eiyo HomePod mini kune vashandisi vakatove vaisa odha yavo kubva munaNovember 16. Asi sezvazvinowanzoitika, kune vamwe "vakavharirwa mukati" vanyori vakatoigamuchira (kwete yedu kesi) uye vatanga kutsikisa kwavo kwekutanga.
Vashanu vekutanga vakatonyora nezve izvo zvavakaona (uye nekunzwa) zvechigadzirwa chitsva vakabvumirana: dhizaini yakanaka kwazvo uye izwi rinoshamisira nehukuru hwayo. Ngatione zvimwe zvavakataura.
Sezvatove takadaro mazuva mashoma apfuura neiyo iPhone 12 mini, takaona kuti vamwe vanyori venhau veAmerica vakatogamuchira iyo nyowani ImbaPod mini zvinhu zvekutanga zvisati zvasvika zvakarongerwa Mbudzi 16, uye isu tichapfupikisa zvavanofunga nezve mukoma mudiki weApple's HomePod.
Pfungwa shanu dzakasiyana dzePambaPod mini
Brian Wmv de TechCrunch anonyora kuti iyo 99 Euro HomePod mini inopa "zvinoshamisa kwazvo" kurira kwehukuru hwayo nemutengo. Ongororo yacho inorumbidza chaizvo 360-degree kurira.
Iye anofunga kuti nepo Amazon yakachinjira kumukurukuri wepamberi weiyo Echo nyowani, Apple inoramba ichitarisa pane 360-degree kurira. Iye anoti akashandisa toni yeakasiyana masipika masipika, uye anonyatso kufadzwa nezwi iro kambani rakakwanisa kugadzira ne 3,3-inch mudziyo.
En Engadget, Nathan Ingraham iyo inorumbidzawo HomePod mini yemhando yepamusoro, yekuve mutauri mudiki. Anofunga kuti zvinonzwika zvakanaka, sekureba sekuchengetwa mukamuri diki. Usakanganwa kuti mutauri mudiki, uye zvishamiso hazvigone kuitika.
Kubatanidzwa kwayo neApple ecosystem uye nemutengo wakaderera pasina mubvunzo uchatamba mukumufarira.
A Dhani seifert de vava kuda, haingomugutsi chete. Iwe unofunga iyo HomePod mini haina kurira senge yakanaka sevamwe vakafanana nemitengo yemakwikwi anokwikwidza. Inoti inowira pasi pehunhu hwevatauri mune imwecheteyo renji, senge iyo Echo uye Nest Audio.
Todd Haselton tsanangura mukati CNBC iyo Apple inoda kugadzira pasi yakarasika ichipesana neEcho yeAmazon, uye iri kuzoyedza nePambaPod mini. Anorumbidza kuti akabatanidzwa zvakadii muApple ecosystem, achiibata ne iPhone yake.
En CNET, Molly mutengo Anofunga uyu mutsva weApple mutauri anotengesa kunge hotcake. Kunyanya kune vanhu vakajairwa kudyidzana naSiri. Nemutengo unonzwisisika zvakadaro, wese fan weiyo yakarumwa apuro zvechokwadi anowana imwe.
Nicole nguyen nyora pamusoro The Wall Street Journal kuti iyo HomePod mini inopinda muhondo pakati peNest Audio neAmazon Echo. Vatauri vatatu vakangwara vane mutengo wakafanana chaizvo. Wekupedzisira kusvika ane mukana weiyo Apple ecosystem.
Muchidimbu, anenge munhu wese anofunga kuti kurira kwePambaPod mini inoshamisa, tichifunga nezvehukuru hwayo. Pasina kupokana, mumusika we smart speaker, Amazon neGoogle ndivo vatungamiriri. Asi iyo HomePod nyowani inofarira iro diki apuro iro rakadhinda-rakadhindwa pazasi. Mutengo waro wakaderera uchaita kuti legion yeApple mafeni iende mairi pasina kupokana. Chichava chipo chakanaka cheKisimusi ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » HomePod » Ongororo yekutanga yeiyo HomePod mini yatobuda
Eve Degree, chiteshi chidiki chemamiriro ekunze cheKeKKit
Shanduko mukutakura kweiyo iPhone 12 Pro Max uye 12 mini